Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay qaraxii ka dhacay saldhiga degmada Waaberi - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay qaraxii ka dhacay saldhiga degmada Waaberi
Waxa caawa ka dhacay qarax ay ka dambeeyeen argagixisada shabaab laakiin dadk aqaar sheegayaan in miinada ay aaseen maleeshiyadii maalmo dhaweyd ku sugneyd Muqdisho ee qabqableyasha Hawiye ee sheegan jirey misharixiinta.
“Inaa lillaahi wa inaa Ilayhi raajicuun. Waxaan ka tacsiyeynayaa geerida taliyihii booliiska degmada Waaberi Gaashaanle Axmed Sheekh Cabdullaahi Baashane, Saraakiisha iyo Askarta kale ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee u shahiiday iyagoo ka shaqeynaya Amniga dalkooda iyo dadkooda.
Dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo Hay’adaha Amniga waxaan ugu baaqayaa in si wadajir ah ay isaga kaashadaan ka hortagga dhiigmiiratada shabaab.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Alle uga baryey iyada oo lagu jiro habeen kheyr badan oo ka mid ah tobankii danbe ee bisha barakaysan ee Ramadaan saraakiishii, askartii iyo shacabkii Soomaaliyeed ee ku naf waayey qaraxa uu hooygooda ka yeelo Jannatul Firdowsa, Saraakiisha kale iyo shacabka ay waxyeeladu ka soo gaartayna Eebbe u booga dhayo.
Sidoo kale raiisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa isaguna ka hadlay qaraxaas dalbadeyna in loo midoobo dhiigmiiratada xalaashatey dhiiga Muslimiinta.